भाषा संस्कार र संस्कृति र हामी | मझेरी डट कम
editor — Sat, 05/28/2016 - 05:07
सबैले भन्छन " हाम्रो भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, संबर्धन तथा प्रवर्धन गर्नु जरुरी छ ।" के भाषा साहित्यको सवालमा कुनै पनि अन्योल छैन, जति बाँचेको छ, सरासर त्यसको संरक्षणमा लागे हुन्छ । भाषा साहित्यका सवालमा केन्द्रित रहेर फेरि अर्को तर्क गरौंला । तर,संस्कृतिको सवालमा द्विविधा र अन्योलहरू छन, जसवारे म यहाँ केही भन्न चाहन्छु । संस्कृति भनेकै वास्तवमा केहो ? छुट्याउन कठिन भइरहेको छ । हाम्रो नेपाली समाजलाई । संस्कृति भित्रै संस्कार - परम्पराका कुरा मिसिएका छन । र कुन कुन संस्कारहरू जायज - सान्दर्भिकछन, आजको परिवेशमा भन्ने किटान हुन सकेको छैन । कुन कुन सांस्कृतिक आधारहरूको प्रवर्धन र संरक्षण तर्फ सामुहिक पहल हुन पर्ने हो ? यस कुरामा कसैले निर्कोल्य गरेको छैन र प्रयास पनि गरेको भान भइरहेको छैन ।
संस्कृति सामाजिक अंत: क्रिया एवं सामाजिक व्यवहारमा उत्प्रेरक प्रतिमानहरूको समुच्चय हो । यस समुच्चयमा ज्ञान, विज्ञान, कला, आस्था, नैतिक मूल्य एवं चलनहरू समाविष्ट हुन्छ । संस्कृति भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तथा आध्यात्मिक अभ्युदयको उपयुक्त मानिसको श्रेष्ठ साधनाहरू र सम्यक चेष्टाहरूको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो । यसले मानिसको वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवनको स्वरूपको निर्माण, निर्देशन, नियमन र नियंत्रण गर्दछ । अत: संस्कृति मानिसको जीवन पद्धति, वैचारिक दर्शन एवं सामाजिक क्रियाकलापमा त्यसलाई समष्टिवादी दृष्टिकोणको अभि व्यन्जना हो । यसमा प्रतीकहरूद्वारा अर्जित तथा सम्प्रेषित मानव व्यवहारहरूलाई सुनिश्चित प्रतिमान संनिहित हुन्छ । संस्कृति अनिवार्य अभ्यन्तर कालक्रममा प्रादुर्भूत एवं संचित परंपरागत प्रामाणिकता तथा औचित्यप्रतिपादनसँग सम्बद्ध हुन्छ । प्रत्येक संस्कृति चयन क्षमता एवं वर्णनात्मकता सामान्य सिद्धान्तहरूको संनिवेश हुन्छ । यस्को माध्यमबाट सास्कृतिक आधारका नाना रूप क्षेत्रहरूमा मानव व्यवहारको प्रतिमान सामान्यीकरणद्वारा अनुकरणीय हुन्छ । सास्कृतिक मान, चलनहरू सामान्यीकृत एवं सुसंगठित समभावको रूपमा स्थिरतातिर उन्मुख हुन्छ । यद्यपि संस्कृतिका विभिन्न तत्वहरूमा परिवर्तनको प्रकृया शाश्वत चलिरहन्छ । समाजको परिस्थितिमा परिवर्तनको शाश्वत प्रकृयाले प्रतिमानहरूलाई प्रभावित गर्दछ । सामाजिक विकासको प्रकृया साँस्कृतिक प्रतिमानहरूको परिवर्तनको प्रकृया हो ।
संस्कृति प्रकृति प्रदत्त हुदैन । यो सामाजिकरणको प्रकृयाद्वारा अर्जित हुन्छ । अत: संस्कृतिका ती संस्कारहरूसँग आवद्ध, जुन हाम्रा बंश परंपरा तथा सामाजिक विरासतको संरक्षणको साधन हुन्छ । यसको माध्यमबाट सामाजिक व्यवहारको विशिष्ठाहरूको एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा नियमन हुन्छ । नियमनको यस नैरंतर्यमा नै संस्कृतिको स्तित्व निहित हुन्छ । र, यसको संचयन प्रबृतिले यसको विकासमा गति प्रदान गर्दछ । जस्मा नवीन आदर्शको जन्म हुन्छ । यी आदर्शहरूद्वारा वाह्य क्रियाहरू र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणको समानयन हुन्छ तथा सामाजिक संरचना र वैयक्तिक जीवन पद्धतिको व्यवस्थापन हुन्छ ।
भाषा र संस्कृतिबाट नै आउँछ जीवनमा जीवन्तता । जीवनमा जीवन्तता त्यबेला मात्र आउन सक्छ जब हामी आफ्नो भाषा एवं संस्कृति प्रति जागरूक हुन्छौं । भाषा एवं संस्कृति बिना हामीले भौतिक रूपमा जति सुकै प्रगति गरे पनि, परिवेशमा यसबाट कुनै लाभ हुदैन । भाषा एवं संस्कृति जीवित तब मात्र रहन्छ जब त्यो हाम्रो परिवेश हुन्छ । अफ़सोस हामी आफ्नो जरोलाई नै छाडिरहेका छौं ।
भाषा हाम्रो संस्कृति एवं संस्कारको प्रतिक हो । भाषा धर्म होइन । धर्मलाई भाषाको जरुरत हुन्छ । एउटा भाषाको रूपमा नेपाली नेपालको पहिचान मात्र होइन बल्कि भाषा हाम्रो जीवन मूल्यहरू, संस्कृति एवं संस्थाकारको सही संवाहक, संप्रेषक र परिचायक पनि हो । नेपाली सबै नेपाली भाषाहरूको दिदी भएको नाताले नातोले उसको उपयोगी र प्रचलित शब्दहरू आफूमाथि समाहित गरेर सही अर्थमा नेपालको सम्पर्क भएको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
नेपाली भाषा वैश्विक पलटलमा पनि तकनिक र डिजिटलाइजेशनको क्षेत्रमा विस्तार र ठूलो बजारका अनन्त संभावनाहरू समेटने क्रममा छ । नेपालीको यसै महत्वलाई दृष्टिगत गर्ने तकनीकी कम्पनीहरूले यस भाषालाई बढ़ावा दिने कोसिस गर्दै छन । गुगलको तथ्याँक मुताबिक़ आज इन्टरनेटमा मौलिक विषयवस्तु ( कन्टेन्ट ) नेपाली भाषामा रचिदै छ र रचिनु पनि पर्दछ । उद्योग उत्पादनहरूले पनि नेपाली भाषामा लेख्ने, जस्का वारेमा विचार गरून । सरल, सहज र संगम भाषा भएकाले नेपाली विश्वको वैज्ञानिक भाषा हुन सक्छ ।
संस्कृतिका दुई पक्ष हुन्छन्
१ -आधि भौतिक संस्कृति
सामान्य अर्थमा आधिभौतिक संस्कृति सभ्यताको नाउँबाट अभिहित गरिन्छ । संस्कृतिका यी दुवै पक्ष एक अर्काबाट भिन्न हुन्छन । संस्कृति अभ्यन्तर, यस्मा परंपरागत चिन्तन, कलात्मक अनुभूति, विस्तृत ज्ञान एवं धार्मिक आस्थाको मिश्रण हुन्छ । सभ्यता वाह्यवस्तु जस्मा मानिसको भौतिक प्रगति र सहायक,सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र वैज्ञानिक उपलब्धिहरू सम्मिलित हुन्छन । संस्कृति हाम्रो सामाजिक जीवन प्रवाहका उद्गगम स्थली हो र सभ्यता यस प्रवाहमा सहायक उपकरण । संस्कृति साध्य हो र सभ्यता साधन । संस्कृति सभ्यताको उपयोगिताका लागि प्रतिमान उपस्थित गर्दछ ।
यी विभिन्नता हुदा हुदै पनि संस्कृति र सभ्यता एक अर्कासँग अंत:सम्बन्ध छ र एक अर्कालाई प्रभावित गर्दछु । सास्कृतिक मूल्यहरूको स्पष्ट प्रभाव सभ्यताको प्रगतिको दिशा र स्वरूपमा पर्दछ । यी मूल्यहरूका अनुरूप जुन सभ्यता निर्मित हुन्छ, तेई समाजद्वारा गृहित हुन्छ । सभ्यताको नवीन उपलब्धिहरू पनि व्यवहारहरू, हाम्रा मान्यताहरू या अर्को शब्दमा हाम्रो संस्कृतिलाई प्रभावित गर्दछ । समन्वयको प्रकृया अनवरत चलिरहन्छ ।
सम्पर्कमा आउने भिन्न संस्कृतिहरूले पनि क अर्कालाई प्रभावित गर्दछ । भिन्न संस्कृतिहरूको संपर्क त्यस्मा सहयोग अथवा सहयोगको प्रकृया अनवरत चलिरहन्छ ।
सम्पर्कका भौतिक तथा आधिभौतिक पक्षहरूको विकास समानान्तर हुदैन । सभ्यताको विकासको गति संस्कृतिको विकासको गतिभन्दा तीब्र हुन्छ । फलस्वरूप सभ्यता विकास क्रममा संस्कृतिभन्दा अगाडि निस्किन्छ । सभ्यता र संस्कृतिको विकासको यय असंतुलनले सामाजिक विघटनलाई जन्माउँछ । अत: यस प्रकार प्रादुर्भूत संस्कृति विलंवनाद्वारा निर्मित समाजद्वारा उत्पन्न असंतुलन र अव्यवस्थाको निराकरण हेतु आधिभौतिक संस्कृतिमा प्रयत्नपूर्वक सुधार आवश्यक छ । विश्लेषण, परीक्षण एवं मूल्याँकनद्वारा सभ्यता र संस्कृतिको नियमनले मानिसको भौतिक र आध्यात्मिक अभ्युत्थानको अनुपम सहयोग प्रदान गर्दछ ।
संस्कृति यद्यपि कुनै देश वा कालविशेषको उपज हुदैन । यो त एउटा शाश्वत प्रकृया हो । तथापि कुनै क्षेत्र विशेषमा यसको जुन स्वरूप प्रकट हुन्छ त्यसलाई एउटा विशिष्ट नाउँबाट अभिहित गरिन्छ । यो अभिधाकाल, दर्शन, क्षेत्र, समुदाय अथवा सत्तासँग संबद्ध हुन्छ । मध्ययुगीन संस्कृति, भौतिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, मुगल संस्कृति, हिन्दू संस्कृति वा विशिष्ट स्वरूपबोधका साथ यस तथ्यलाई उद्भाषित गर्दछ । संस्कृतिको विशेषण प्रदान गर्नेले कारकद्वारा संस्कृतिको सहज स्वरूप अनिवार्य प्रभावित हुन्छ ।संस्कृति हाम्रो जीवनसँग गाँसिएको छ । यो कुनै वाह्यवस्तु होइन । नत कुनै आभूषण हो जसलाई हामी प्रयोग गर्छौ । यो त केवल रंगहरूको स्पर्श मात्र पनि होइन ।यो त्यो गुण हो जसलाई हामी बनाउँ छौं । संस्कृति बिना हामी हुदैनन । संस्कृति परंपराबाट, विश्वासबाट, जीवनको शैलीबाट, आध्यात्मिक पक्षले, भौतिक पक्षले, निरन्तर गाँसिएको हुन्छ । यसले हामीलाई जीवनको अर्थ, बाँच्ने तरीक़ा सिकाउँछ । हामी नै संस्कृतिको निर्माता हौं र साथै संस्कृतिले हामीलाई मानिस बनाउँछ ।
संस्कृति एउटा मौलिक तत्व हो, धार्मिक विश्वास र त्यस्को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति । हामीले धार्मिक पहिचानको सम्मान गर्नु पर्दछ साथै सामयिक प्रयत्नहरूबाट पनि परिचित हुनु पर्दछ । जसले गर्दा अंत: धार्मिक विश्वासहरूको कुरा हुन सकोस । जसलाई प्रायः अंत: सांस्कृतिक वार्तालाप भनिन्छ ।वाच्ने एउटा तरीका हुन्छ त्यो हो सत्यमार्ग। सहअस्तित्वले विभिन्न संस्कृतिहरू प्रतिको विश्वास भाषा र संस्कृतिलेनै ल्याउँ छ ।
जीवनमा जीवंतता त्यसवेला मात्र आउन सक्छ जब हामी आफ्नो भाषा एवं संस्कृति प्रति जागरूक हुन्छौं । भाषा एवं संस्कृति बिना हामी भौतिक रूपमा जति सुकै प्रगति गरौं, तर परिवेशलाई यसबाट कुनै लाभ मिल्दैन । भाषा एवं संस्कृति जीवित तवमात्र रहन्छ जब त्यो हाम्रो परिवेशमा रहन्छ । अफ़सोस कि हामी आफ्नो जरोलाई नै छाडी दिइरहेका छौं ।
भाषा र संस्कृति हरेक समुदायको पहिचान हो र हामी सबैका पहिचान हौं ।आफ्नै मौलिक भाषा र संस्कृति बिना समुदाय अपूर्ण र अस्तित्व बिहीन हुन्छ । हामी नेपालीहरू बीच जात जाती भाषा भाषी धर्म र संस्कृति विविधता भएता पनि समग्रमा हामी नेपाली हौं । नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व वचाउनु हो जुन हरेक नेपालीको कर्तव्य हो ।
भाषा, संस्कृति, कला समुदायका प्रमुख अंग हुन । यी सम्पूर्ण अंगहरूको संरक्षण र विकास समुदायकै संरक्षण र विकास हो । विभिन्न समुदायहरूका धर्म, कला र संस्कृति अनुसारका चाड,पर्व तथा रीतिरिवाज आदि मनाएर धर्म, कला र संस्कृति जगेर्ना गर्न सकिन्छ भने ज्ञान तथा विचार संचार गरेर भाषा र साहित्यको जगेर्ना गर्न सकिन्छ ।
भाषा र साहित्यको संरक्षण तथा विकासका लागि वालवालिकाहरूलाई सानैदेखि उनीहरूले बुझ्ने गरी सरल चाख लाग्यो ढाँचामा पढाउँदा तथा लेखाउँदा उनीहरूको मन जित्न र इच्छा शक्ति बढाउन सकिन्छ । सरल भाषामा लेखिएका छोटा र रोचक कथा लय हालेर पढ़िने छन्दमा रचिएका कविता तथा श्लोकहरू आदि साना वालवालिकाहरूले बढी मन पाउने र बुझ्न सरल हुने हुँदा यस्ता रचनाहरूबाट सुरूदेखि नै उनीहरूमाथि नेपाली भाषा र साहित्य प्रति रूचि जगाउन सकिने कुरा विभिन्न अनुभवहरूबाट देखिएको छन ।
बिरोधको शैली र पक्षपातको नौटङ्की
डिसीमा अनेसास सर्बोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार तथा देवकोटा जयन्ती समुद्घाटन
झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा
दुई मुक्तक (अरु केही छैन, उद्दिग्न यी आँखाहरू)
मन केले बुझाउने
आगमनले तिम्रो मेरो जीवनमा
प्यारो छ तिम्रो अनमोल नाम (शहिद)